कोरोनाले बीमाप्रतिको सोचलाई झकझकाइदियो - samayapost.com
सोमबार, ६ वैशाख २०७८
कोरोनाले बीमाप्रतिको सोचलाई झकझकाइदियो
समयपोष्ट २०७७ फागुन २६ गते ८:००
जीवन बीमा क्षेत्रलाई कोभिडले कस्तो प्रभाव पार्यो ?
कोभिडले सम्पूर्ण क्षेत्रको वृद्धि–विकासलाई केही मात्रामा रोकेको छ । कम्पनीहरुले व्यावसायिक हिसाबले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यो हिसाबले हेर्दा राम्रै प्रभाव पर्यो । यसमा आश्रितहरु पनि प्रभावित बने । एजेन्सीको आम्दानी, उनीहरुले घर–घरमा पुगेर दिनुुपर्ने सेवा र कम्पनीले दिनुपर्ने सेवामा सुरुवातमा केही असर पुग्यो । लगानीबाट आम्दानी गर्ने पाटोमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै घट्दा हामीले लगानी गर्ने क्षेत्र पनि कम हुन पुुग्यो, जसले गर्दा लगानी गर्ने अवसर खुम्चियो ।
शाखा विस्तारको क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो हिसाबले निर्णय गर्ने हो । अन्य क्षेत्रभन्दा हामीलाई कम असर ग¥यो । हाम्रो व्यवसाय विस्तार २५ प्रतिशतमाथि वृद्धि भएको छ । कोरोनाले सम्पूर्ण कुरा नकारात्मकमात्र प्रभाव पार्यो भन्दा पनि केही कुराहरुमा सकारात्मक प्रभाव पनि रह्यो । जस्तो– डिजिटलाइजेसनमै जाने कुरामा कम्पनीहरुले योजना बनाइरहेका थिए, कोभिडले कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्न सहयोग गरिदियो । वर्क फ्रम होम र डिजिटलाइजेसनको कल्चरलाई यसले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याइदिएको छ ।
अर्को, विपद्को बेलामा काम लाग्ने भनेको बीमा हो । कोरोना विपद्ले बीमाप्रतिको मानिसहरुको सोचलाई झकझकाइदियो । जीवनमा हरेक समय जोखिम हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा मानिसहरु सचेत पनि भए । यो वर्ष सलहले खासै असर नगरे तापनि कोरोनाले धनजनका साथै देशकै अर्थतन्त्रमा क्षति तुल्यायो । ओभरअल प्रभावमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुवै रहे ।
अब डिजिटल माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई निरन्तरता दिन कत्तिको चुनौती छ ?
ग्राहकहरु तयार भइसकेपछि त्यसलाई लागुु गर्न गाह्रो छैन । यो बीचमा इन्टरनेटको विस्तार, डिजिटल प्लेटफर्मको विस्तारले गर्दा यसले मानिसहरुको माइण्ड सेटलाई सिफ्ट गरिदिएको छ ।
यसमा चुनौती छैन । कम्पनीहरुले पहिले पनि योजना बनाएका थिए तर ग्राहकको तहमा तयारी थिएन । डिजिटलमा जान ग्राहकहरु त्यससँग परिचित हुनुुपर्यो । पहिले मानिसहरु जुम, वेभ चलाउनुुभन्दा भेट्न सजिलो मान्थे तर अब त्यस्तो अवस्था रहेन । आईपीओ भर्ने सन्दर्भमा पनि पहिले मानिसहरु घण्टौँ लाइनमा बस्थे तर डिम्याट लागु हुनेबितिक्कै त्यसले मानिसहरुलाई सजिलो बनाइदियो । त्यसकारण ग्राहकहरु तयार भइसकेपछि त्यसलाई लागुु गर्न गाह्रो छैन । यो बीचमा इन्टरनेटको विस्तार, डिजिटल प्लेटफर्मको विस्तारले गर्दा यसले मानिसहरुको माइण्ड सेटलाई सिफ्ट गरिदिएको छ ।
कोरोना बीमा केही विवादित पनि भयो । यसले समग्र बीमा उद्योगलाई सकारात्मक/नकारात्मक कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
कोरोना बीमाका प्रिन्सिपलबारे केही कुराहरु छलफलका विषय बनेका छन् । यो व्यावसायिक हो या सामाजिक बीमा हो भन्ने बहसको कुरा छ । यो व्यावसायिकभन्दा पनि सामाजिक बीमा हो । दोस्रो, यसले समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाइदियो । आजको मितीसम्म साढे तीन–चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको अवस्था छ । विदेशमा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा जनताहरुलाई सरकारले नै क्यास दिएको थियो । तर, हाम्रोमा जनताको पैसा अर्थतन्त्रमा पुर्याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । बीमाको नाम नै नसुुनेका मानिसहरुमा पनि कोरोना बीमाले यो विषय र शब्दसँग परिचित तुल्याइदियो । गाउँ–गाउँमा बीमाको पहुँच पुुग्नुुका साथै बीमाले चर्चा पायो । त्यसकारण यसलाई म त सकारात्मकरुपमा लिन्छु ।
जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरु के–के हुन् ?
सङ्ख्याको हिसाबमा एजेन्सीहरु बढे तापनि त्यही तहमा उनीहरुको क्षमता विकास भएको छैन । उनीहरुलाई क्षमतावान् बनाउनु नै चुनौती हो ।
व्यावसायिक एजेन्सी, जसले यो सेवा ग्राहकहरुलाई लगेर दिन्छन्, तिनीहरुको तहमा गर्नुपर्ने कामहरु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । पेशागतरुपमा उनीहरु सक्षम भए भने उनीहरुले ग्राहकहरुलाई दिने सेवा र कम्पनीले पाउने सेवा बेस्ट हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुको सेवालाई व्यावसायिक र स्तरीय बनाउनुु अहिलेको चुनौती हो । सङ्ख्याको हिसाबमा एजेन्सीहरु बढे तापनि त्यही तहमा उनीहरुको क्षमता विकास भएको छैन । उनीहरुलाई क्षमतावान् बनाउनु नै चुनौती हो । आजको बजारमा स्रोत–साधनहरु पनि कम छन् । प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थीहरु पनि कम छन् । प्रशिक्षार्थीहरुले काम गर्दै, सिक्दै पनि गर्नुपर्ने भएकाले एग्रेसिभ्ली अहिले बढी विस्तार गर्दै लैजानुुपर्ने अवस्था छ ।
जीवन बीमामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेका अभिकर्ताहरु हुन् । अभिकर्ताहरुसँग सिटिजन लाइफले कसरी समन्वय गरेको छ ?
अभिकर्ताहरुका लागि हाम्रा थुप्रै सेड्युल प्रोग्रामहरु छन् । अभिकर्ताहरुका लागि हामी मुख्यतया तीनवटा कुराहरुलाई बढी फोकस गर्छौं । पहिलो यही पेशाबाट उसको आर्थिक आवश्यकता पूरा होस्, दोस्रो ऊ व्यावसायिक हिसाबले दक्ष र योग्य होस् । त्यसका लागि हामीले नियमितरुपमा क्षमता विकासका तालिमहरु चलाउँदै आएका छौं । तेस्रो, यो पेशालाई सम्मानित बनाउन, समाजमा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको गरिमा बढाउन हामीले उचित काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न कम्पनीले विशेष लगानी गरेको छ ।
सिटिजन लाइफका आगामी योजना के–के छन् ?
हाम्रो व्यवसाय राम्रोसँग वृद्धि भइरहेको छ । बजारमा सिटिजन लाइफलाई मानिसरुको एकमात्र रोजाइ बनाउने बटम लाइनमा हामीले काम गरिरहेका छौं । उचित सेवा दिने कुरामा एजेन्सीको विकास गरेका छौं । तीनवटा एरिया– कर्मचारीहरुका लागि बेस्ट कम्पनी, एजेन्सीका लागि बेस्ट सर्भिस प्रोभाइडर, ग्राहकहरुका लागि बेस्ट प्रडक्ट र खोजेको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी हाम्रो कम्पनीले काम गरिरहेको छ । यी तीनवटालाई नै फोकस गर्ने भनेको बीचमा बसेर काम गर्ने एजेन्सी हो । एजेन्सीका लागि हामीले विशेष रुपमा स्किमहरु चलाइरहेका छौं । त्यसले गर्दा ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई फोकस गरेर हामी अगाडि जान्छौं । अब क्रमिकरुपमा कम्पनीलाई ब्राण्डिङ गर्दै जाने र कम्पनीलाई पोजिसनिङ गर्ने र प्रोफेसनल भ्यालुु क्रियट गर्ने लाइनमा हामी छौं । बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति स्थापित गर्नका लागि कम्पनी विशेष रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
हामीले साधारण सेयर जारी गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं । नयाँ प्रडक्ट ल्याउने तयारीमा पनि हामी छौं । अहिले हामी विशेष केन्द्रित रहेको भनेको डिजिटल सिटिजन क्याम्पेनमा हो । बेस्ट सर्भिसिङ टुलको विकास गरेर डिजिटल सिटिजन बनाउने क्याम्पेनमा हामी छौं । पोलिसी किन्नसमेत कष्टोमरहरु हामीकहाँ आइरहनुुपर्दैन । अनलाइनबाटै पोलिसी किन्न सकिने सुविधा छ । फुल डिजिटल सर्भिस दिने पहिलो कम्पनी सिटिजन लाइफ नै हो ।
भोलिका दिनमा प्रत्येक कम्पनीलाई टार्गेट दिन सकिन्छ
बीमाले भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधान दिन्छ
दाबी भुक्तानीमार्फत् कोरोना बीमाप्रतिको भ्रम चिर्दै लगेका छौं
अरुको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने बीमा कम्पनीहरु अहिले स्वयम् जोखिममा छन्
जीवन बीमामा प्रतिस्पर्धा हैन, गलत खेल हुन थालेको छ
ग्राहकहरुसँग नजिक हुने बाटो पहिल्याएका छौं
अहिलेको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो : प्रचण्ड
राष्ट्र बैंकले पाँच अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री गर्ने
“महामारी फैलियो, छैन सावधानी ”
कोरोनाका बिरामी लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको दुई हेलिकोप्टर गजुरीमा आकस्मिक अवतरण
एउटै कार्यालयका पाँच कर्मचारीको दुर्घटनामा निधन, कार्यालय पाचँ दिनका लागि बन्द
जिल्ला प्रशासन गुल्मीका कर्मचारी सवार गाडी दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु, १० जना घाइते
एमाले सांसद ओलीले भोट हाल्न गल्ती गर्दा….
एमाले सांसद रावलको घरमा ढुंगामुढा प्रहार, प्रहरीले उठाएन फोन
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई कर्मचारीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन